Bere a Awurade gyee Dawid fii nʼatamfo nyinaa ne Saulo nsam akyi no, ɔtoo saa dwom yi de yii Awurade ayɛ.
Nsɛm a ɛwɔ dwom no mu ni:
me Nyankopɔn yɛ me botan; ne mu na minya guankɔbea.
Ɔyɛ me kyɛm, me nkwagye mu ahoɔden,
mʼabandennen, mʼagyenkwa, nea ogye me fi basabasayɛ mu.
“Misu frɛ Awurade; ɔno na ayeyi sɛ no,
Owu asorɔkye twaa me ho hyiae;
ɔsɛe yiri faa me so.
Ɔda mu hama kyekyeree me;
“Na mʼamanehunu mu no, misu frɛɛ Awurade.
Yiw, mefrɛɛ me Nyankopɔn pɛɛ mmoa.
Ɔtee me nne fii ne kronkronbea.
Me sufrɛ duu nʼasom.